Muranka gobolka ee biyaha webiga Nile - BBC Somali - Warar
Muranka gobolka ee biyaha webiga Nile
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 June, 2013, 09:17 GMT 12:17 SGA
Deegaan uu maro webiga Nile
Wasiirka Itoobiya u qaabilsan kheyraadka biyaha, Alemayehu Tegenu, ayaa ku celiyay inaysan jirin sabab uu dalka Masar uga welwelo biyo-Xireenka weyn ee Itoobiya dhiseyso ee magaciisa loo soo gaabiyo (GERD).
wasiirku waxaa uu sheegay in dhismaha biyo-xireenku aanay wax halis ah ku haynin dalalka Masar iyi Suudaan toona. " Ma lihin wax qorshe ah oo lagu waxyeelleynayo waddammada uu webiga Nile-ku maro ee Suudaan iyo Masar. Haddii ay Masar hayso arrimo ay kala xaajooto Itoobiya, aad baan diyaar ugu nahay inaan kala hadalno" ayaa laga soo xigtay wasiirka.
Dhinaca kale, madaxweyneyaasha Masar iyo Suudaan ayaa la sheegay inay shalay telefoonka ku wada hadleen iskuna afgarteen inay isku meel ka istaagaan danaha labada waddan ee walaalaha ah. labada hoggaamiye waxay ka wada hadleen arrinta dhismaha biyo-xireenka Itoobiya.